INONA KAY NO TENA ANTONY HITERAHANA ?
Par: Mpitady Fahamarinana
Date: 06 janvier 2018 - 23:39
Mba te hizara ny zavatra mampikorontana ny saiko fotsiny,
Za re olona dia tsy mba hiteraka zany a !
Fijaliana ve no aleha eto an-tany dia handeha hitonatonana hanome aina aho, raha efa fantatro zao hoe ho sahiran-tsaina sy hiatrika zavatra tsy ho tanty maro be ilay "ho zanako" (raha toa ka miteraka par accident io) dia mbola hanao zaza ihany ve aho ?
Indrindra eto amin'ny firenena misy antsika izay tena tsy misy avenir ho an'ny rehetra, tsss . Ny avenir natao ho an'ireo zanak'olona ambony (ny élite) sy ireo izay manana ny ampy ahafahany manome education milay sy fahasambarana madinika an-davan'andro ho an'ilay zaza.
Ny mahagaga nefa dia ny olona tena tsy nisy avenir no miteraka betsaka indrindra eto amin'ity firenena ity (tsy voatery hoe ny 4amis)
Raha mba hitovy fisainana amiko daholo ny malagasy mety hilamina ny firenena, amiko tokony asiana "autorisation" ny fanaovana zaza, mampalahelo mantsy mahita olombelona be dia be ireny tsy mahafantatra akory izay antom-pisiany hany ka mirenireny sy manao adalàna anaty fijaliana fotsiny mandritra ny fiainany.
Marihiko fa za tsy miraharaha na tsy manan-taranaka ary, tsy voatery akory. Na ho voatondro molotra ary aho hoe tia tena na koa hoe mampalahelo fa tsy niteraka. Tsy rarahiko !
Bandy aho manoratra io, 21 taona, mino an'A/tra fa tsy mpiditra am-piangonana
Date: 07 janvier 2018 - 00:48
Eo amin'ny fanabeazana no tokony hatao tsara mba hananan'ny ankizy avenir.
Tsy voatery hoe manam-bola vao afaka manao izany an.
- ny fitaizana ao an-trano dia afaka manoro ny tsara sy ny ratsy rehetra
- ny fampisehoana sy fanehoanao fitiavana ny zanakao dia efa ampinga lehibe ho azy
- ny fahalalana omena ny ankizy any am-pianarana dia ampianao tosika kely isan'andro @ fanarahanao ny enti-modiny
- ny fanampidirinao azy eny @ ireny centre culturel ireny: hamakiany boky, sns, dia manampy be azy koa @ fiainany
- ny fanabeazana azy any am-piangonana @ sekoly alahady @ tily sns dia manefy azy ihany koa @ fiainany
====> IZANY HOE NY ANJARANAO DIA MANOME AZY NY FITAOVANA REHETRA HIVELARANY MBA AHAFAHANY MIHATRIKA NY FIAINANY
Fa ilaina ny manan-janaka. Ary Madagasikara mbola lehibe afaka hivelomana tsara.
Date: 07 janvier 2018 - 20:19
Anaka ,tena efa lasa lavitra be ny herin tsainao ,ary raha izao no mitohy dia na ianao ho lasa adala na ianao mamohy fo .Mino an Andriamanitra ianao hoy ny teninao ,tsara izany ,tsy hanana lesona be omena anao aho ,fa matoa nasiany ny lahy sy ny vavy eto an tany dia misy dikany .Natao hiray ireo ary avy amin'ny firaisin'ireo no mahatonga olombelona ,koa na inona toerana misy anao na toa inona ,raha manaraka ny toro marika izay nomeny ianao dia ho avy fotsiny ny taranaka ,ka raha mino azy ianao dia hankatoavy ny teniny .Farany hamaranako ny teny ,tsy azo foanana ny fiterahana fa azo ferana .
Date: 07 janvier 2018 - 20:33
Ny zanaka dia nateraka mba ho tiavina sy kolokoloina
Sambatra izay manam-pitiavana, ary tena hafa ny fitiavan-janaka
Date: 08 janvier 2018 - 13:14
Tena mitovy toe-tsaina isika sy Mpitatdy Fahamarinana.
Ankoatra ireo voalazanao ireo raha eto an-tany izay ady @ fiainana (miasa vao mihinana), ny tsy fandriam-pahalemana, ny loza voanjahanahary sns.. dia eo koa ny ady @ devoly izay tena farak’izay sarotra satria izy miketrika mandrakariva izay hahavery antsika. Eto an-tany fandalovana fa any ankoatra mandrakizay ary miankina ny ataontsika eto ny hisy antsika rahatrizay. Dia raha mieritreritra za hoe raha hiteraka ataoko mitovy @ zana-bahoaka ny hitazaiko ny zanako fa ho tazaiko @ fahamarinana sy ny fahamasinana dia mety hitsiriritra ny ankizy izy dia mety ho sarotra @ ny miaina satria tahaka ny an-tery ilay izy dia lasa enta-mavesatra. Ho ahy manokana fandresen-dahatra ny fitondra-tena tsara izay hihezahako atao dia tsy enta-mavesatra fa ny devoly no masiaka dia tena tsy voatohatro indraidray.
Par: Mitady Ny Marina
Date: 08 janvier 2018 - 13:38
Fanabeazana> Ka ireo indrindra no olana. Izaho dia tena "perfectionniste" ka raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny eritreritro ny personnalité an'ilay zaza dia tena mety hanenina be aho. Raha tsy manaraka tsara ireo voalzanao ireo izy mandrapa-lehibeny dia mety ho lasa.
Iza no tsy mba haniry ny zanany ho tafita be amin'ny fianarana sy ny asa, kanefa ny zaza tsy afaka terena hanoy ny lalana tsy vitanao, manana ny fiainany sy ny nofinofîy koa izy mantsy.
Raha miteraka aho dia iriako izy hanoy ny lalana tsy vitako. Ka tena lasa fitiavan-tena raha izay.
Date: 08 janvier 2018 - 13:56
Dadatoabe> Marina daholo zany fa tsy afaka hiankina amin'ny fivavahana foana, mino aho hoe misy hery miafina nahatonga an'izao tontolo izao fa za tsy mba manaraka ny daholo be amin'ny resaka fiangonana, ny baiboly amiko mitovy amin'ny lalàna ihany , eo @ zavatra tokony ho ataon'ny olombelona sy ny tsy tokony ho ataony, zavatra noentin'ny vahiny niditra teto koa ilay izy fa tsy hoe isika malagasy ihany no nikaroka ny fisian'Andriamanitra sy namorona ny eglizy.
Marianna> Ka izay mintsy, tsy paradisa eto an-tany. Raha sanatria tsy tafavoaka amin'ny fiainana ilay ray aman-dreny dia mijaly koa ny zanany. Izay no tena tsy ho tantiko raha miteraka aho hoe sanatria tsy misy fidiram-bola tampoka dia tsy ho zakako ny ahita ny zanako hijaly be eo, aleoko za irery no mijaly raha tratran'ny faillite resa-bola ohatra.
Mety tsy nanana eriteritra ohatran'izao aho raha toa ka teraka tanaty fianakaviana manan-karem-be. Za akory tsy hoe olona sahirana be fa mandinindinika ny manodidina fotsiny sady tonga saina hoe ho "lambda" mandrapahafaty
Date: 09 janvier 2018 - 13:05
Ny ahy indray "zany ah, fanomezam-pahasoavan'io, koa Izy namorona sy nandrindra aza mi-tsodrano koa aiza indray no ahita?
"zay fa courage!!
Par: io fitiavana io
Date: 11 janvier 2018 - 19:28
Matetika ny olona mihevitra toa anao dia olona voafehin'ny hita maso. Toy ny hoe ny akanjo madio sy ny fiara sy ny educations etc. no mamaritra ny fahasambarana. Ny olona manoloana ny fahafatesana nefa mahatsapa daholo fa ny fitiavana ihany. Ny fitiavana no tsy ampy aminao ka mahatonga anao tsy te hiteraka. Tsy hoe tia tena ianao, fa tsy ampy fitiavana. Samihafa be ireo.
Date: 11 janvier 2018 - 21:29
Fitiavana inona no tianao tenenina tsy ampy amiko ? Fitiavana amin'ny ankapobeny sa fitiavana eo amin'ny olon-droa (vavy sy lahy)?
Date: 12 janvier 2018 - 06:00
lehilahy no manoratra:
Ko ra tsy ianao ko no tompon-kevitra farany @io hoe te hahazo zanaka enao dia mahazo ko, na tsy te de tsy hisy tokoa.
Tsisy mahita fiadanana @ zany mororoa saina lava zany, mety hoe miserana ny saina kely sady mahazo feeling sy fanantenana fifalina hoe milay ra mananjanaka tsika dia zay.
Fa ianao io zany ambakain'ny biby raha izany, reny koa efa mahafatatra tsara hoe feno predateur te hinana sy hamono ny zanany fa mananjanaka ihany ireny.
Ny adinonao fotsiny dia heverinao tsy mahavita na inona na inona ilay antenain'ireny olona miteraka maro be ireny, iza hoy enao no antenain'izy ireny?
N'iza n'iza miteraka mahatsapa tsara fa tsy izy tenany no ihambo mahavita ahatomombana ny zanany, rehefa tsy mahatsapa an'zay izy androany dia tsy maintsy mbola hahatsapa izy na ho ela na hoaingana.
Date: 12 janvier 2018 - 20:19
Feno tahotra be ny ho avy ny olona matahotra hiteraka matetika, misy fijaliana ao,ambadik'izany na koa traumatisme fahazaza, nisy manque tany ho any, asa koa mety ratsy Fifandraisana t@ parents.
Mbola tanora ianao,mbola lavitra ny lalana,mety mbola tsy tojo ny olon-tianao.Rehefa en couple manko no mitsiry ny faniriana hanan-janaka miaraka, naturel io fa tsy terena.
Ny manan-janaka dia midika ho fitohizana, mi transmettre "Aina", vavolombelon'ny fifankatiavana. Dia mirary soa e, ary MBA optimiste fa tsy hidina be ny fisainana.
Date: 12 janvier 2018 - 22:57
Ireo izay miteraka dia tsy fidiny ho azy, na voafatotry ny laingan'ny vehivavy ny piéger azy, @ izao fiainana lafo sy tsy zarizary izao dia tsy misy ny haniry zaza ka hamelona azy ao anatin'ny tsy zarizary.
Date: 15 janvier 2018 - 04:52
Mpitady fahamarinana >>> Tena araka ilay pseudo entinao tokoa ny publication ataonao.
Raha mba fantatrao mantsy fa Isaac dia zanaka nomena t@ "Promesse divine" ka na dia ny fiainany manontolo aza dia efa voasoratra fa fahombiazana, noho izany "tso-drano" azony mialoha izany, dia tsy ho namoaka ity post ity ianao.
Manomboka eo @fanorenana ny fanambadiana ka hatr@ fahazoana taranaka avy @izany dia :
Fitahiana mandrakizay : ho an'ireo mahalala ny fomban'ny Mpahary ho an'izany seha-piainana izany.
Ozona afaka mbola tapahana kosa : ho an'ireo izay nitsambiki-mikipy, nanorina azy io (fanambadiana sy ny taranaka vokany) t@ fitaky ny fihetseham-po sy filàna fotsiny ihany.
Date: 15 janvier 2018 - 11:08
Tsy hainao angaha ny atao hoe fiainana r'ise? inona ny atao hoe fiainana dia inona ny atao hoe miaina eto an-tany?
Raha tsy fantr'ise zany dia miala eto @ ty planete atao hoe terre ity ise fa any @ planete atao hoe tous le monde sont garçon mety @ ise.
Fijeriko anao matahotra hiatrika fiainana, ny anao ngamba ilay atao hoe fiainana dia mihinambary dia mandeha2 dia mijery internet dia miandry ho antitra dia fahafatesana dia vita
Aza apetraka mihitsy ilay hoe za tsy hiteraka fa ny tsy mahazo aza efa tsy fidiny fa mba hoe za hiteraka fa ataoko 1 ihany na 2 fa za kely vola. Mazotoa
Date: 16 janvier 2018 - 15:48
Miteraka satria :
1 - Cycle ny fiainana, mila taranaka ianao na dia ny hikarakara anao fotsiny aza rehefa antitra, eny na dia ny hilanja ny fatinao makany ampasana aza.... sns
2 - Zanaka = raison de vivre ! Raha tsy manana zanaka ianao dia tsy hanana tokantrano ihany koa = tsy hanana tanjona eo amin'ny fiainana. Zanaka = Fitiavana ary tena hery lehibe mihintsy manosika anao hivoatra eo amin'ny fiainana !
Na izany aza nefa dia mila karakaraina tsara ny zanaka ary mila omena fitiavana satria ianao no nisafidy ny ahatongavany ety an-tany = adidinao izy sy ny ho aviny !
Par: tsotra b
Date: 16 janvier 2018 - 22:31
Samy nandalo anzay daolo iany tsika an !
Tamzah nitovy taona angah d ôtranzany mitsy, tsy mila vady tsy mila zanaka. Mbola célibat mazava hoa azy.
Efa nahay nidébra nitady vola (argent de poche ), tsy tapaka zany mitsy.
Tsy mbola sendran'ilay vhv tena izy tokoa elah d miteny anzany.
Fa zao zah efa manambady sy zananka 2, fa tena mamy beuh mitsy an.
Lhl 38 taona le manoratra. Okay
Mahereza baina a. Fombany io e
Date: 17 janvier 2018 - 10:36
Tang///Miahiahy be loatra ny fiainanao ianao dia ny zanakao no hataonao sorona hitaiza anao rehefa antitra sy hilanja ny fatinao rehefa maty nefa tsy fantatrao intsony izany @zany. Ity tenantsika ity dia lasa vovoka fa ny fanahy no velona mandrakizay. Tsy aleo ve tahaka an’I Rasalama, ny nofony nohanin’ny alika fa ny fanahiny any an-danitra sy ireo maritiora nodorana velona nefa voavonjy ny fanahy toy izay halevina amim-boninahitra (tsy fantatr’ilay maty akory) nefa ny fanahiny very @ helo. Manarak’izany dia ho valiako ny nosoratanao:
1- Ny aina tsy mifametra fa misy ny zanaka no lasa alohan’ny RAR dia ho diso fanantenana
2- Ny antony hivelomana eto an-tany dia ho fanomanana ny fiainantsika rahatrizay. Manao tsara any an-danitra manao ny ratsy any @ afobe mandrakizay. Fa tsy voatery hoe hanambady dia hiteraka fa raha tsy izay dia olom-poana tsy misy dikany.
Aza diso miahiahy be loatra ny fiainana eto an-tany izay mandalo fa avelao A/tra no handamina ny fiainanao fa kosa mila manao ny sitrapon’A/tra sy manakina ny fiainanao aminy fa tsy mitoky ny hevitrao sy ny fahalalanao.
Date: 17 janvier 2018 - 15:41
Ny fanontanianao dia hoe: INONA NO ANTONY HITERAHANA?
- Ny zaza @ ankapobehany dia vokatrin'ny fifankatiavan'olon-droa, na accident na tsy accident no nisiany. Na mpivady na olon-droa mifankatia dia étape normale ao @ fiarahana ny faniriana te hanan-janaka.Aina itambaran'olondroa, tsangam-baton'ny fitiavana.
Marina fa misy ny exception toy ny zaza vokatry ny viol sy ny filàna fotsiny fa mino aho fa à 70% des cas dia mbola nohon'ny fiarahan'olondroa mifankatia no nisian'ny zaza iray.
- Ny fiterahana dia fandaharan'Andriamanitra mba itohizan'ny taranaka eto an-tany, raha toa an'ny tompon'ny sujet avokoa mantsy ny olombelona dia ho fongana atsy ho atsy ny taranak'olombelona.Adidy masina hoan'ireo mpivady ara-dalàna ny fanohizana aina eto an-tany.
Ekeko fa tsy tokony hiteraka ny couple iray raha tsy misy fidiram-bola ary tsy tokony ho atao maro be ny zaza fa tokony atao mifanaraka @ fahafahana ara-bola. Raha sanatria anefa tsy niaro tena ka misy zaza tampoka dia ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy hanalana zaza fa ny hanangonana herim-po hamelomana azy.
Safidy nefa ny miteraka ka izay mitovy hevitra @ tompon'ny sujet dia tokony tsy hiteraka raha izay no itany fa mety, midika izany fa tsy hanambady koa ianareo satria ho vitsy dia vitsy ny olona hanaiky hanambady anareo nefa tsy hiteraka. Ho vato kiboribory ianareo ka ho célibataire endurcit noho ny tahotra ny ampitso. Tsy hanana courage sy défi hamelomana tokatrano ary hokankerin'ny solitude eny foana, ho antitra irery tsy misy mpijery.
Safidinareo izany , enga anie tsy hanenina na hiova hevitra rehefa ho tara loatra.
Fanamarihana: somary misy problème affectif ary manana depression tokoa ny olona tsy mahita antony @ fiainana toy ireny.
Date: 17 janvier 2018 - 17:40
- Ka ilay fitiavana @ ankapobeny dia ny nohon’ny filana izany hoe mazava ho azy fahotana. Afa-tsy izay ho an’ny mpivady marina araka ny sitrapon’A/tra. Samy hafa ny légalité (fanjakana) sy ny verité (A/tra).
Ny olona manao ny sitrapon’A/tra koa tsy ho tratry ny viol ary arovan’A/tra koa ny zanakavavin’ny mpivavaka.
- Hitanao matoa A/tra nanao ny olombelona dia mba ho solon’ireo anjely nivadika (Losifera sy ny 1/3 n’ny anjely) izay nazera avy tany an-danitra tsy nahazo famindram-po. Banga ny lanitra noho izany ary tsy anjely intsony no nataon’A/tra fa olombelona mbola manana ny safidy afaka hanao tsara sy ratsy ary mbola afaka mifona mandra-pialan’ny fofon’aina. Adidin’ny RAR ny mitondra ny zanaka @ fahamarinana sy fahamasinana kanefa tena sarotra be ny miady @ devoly dia mila en règle tsara koa ny RAR mba ho modelin’ny zanaka sy hisian’ny fitahiana ho an’ny taranaka. Satria A/tra mamaly ny heloky ny ray @ zanaka. Izany no atao hoe fitiavan-janaka: “ tsy tiana ho very any @ helo sy hisian’ny fitahiana”, fa tsy hatao hitsinjovana ny fahaterana sy voninahitra eo anatrehan’ny fiaraha-monina.
Rehefa tsapanao sy azonao tsara ireo nolazaiko ireo dia tsy hiteny mihitsy ianao hoe vato kiboribory izay tsy niteraka ary tsy hanana hianteherana. A/tra efa niteny fa tsy ho sasatra ny hikarakaraka antsika na dia fotsy volo aza isika. Ny fanahy no zava-dehibe indrindra dia mandeha ho azy ny zava-drehetra rehefa matoky an’A/tra marina. Katsaho ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany.
Date: 17 janvier 2018 - 19:04
Azoko ihany ny tahotrao sy ny ahiahy raha mahita ny zava-misy ao @ firenentsika.
Fahantrana, fijaliana, zaza mirenireny, tsisy avenir sns
Misy tokoa Ray sy reny tsy dia mivaky loha @ ho avin'ny zanany akory, mitsoaka adidy, sns e
Fa afaka ovaina tsy ho negatif foana ny fijery dia miova ny fisainana.
Tsy hoe minia mikimpy fa réaliste tsara, raha manana asa Ianao, manana olon-tiana, mbola tanora dia misaora ny Tompo ary matokia Azy fa avy Aminy ny aina
Raha zatra loatra manodina ny fiainanao ho mifantoka tafahoatra aminao ianao dia tena hahita tokoa hoe tsy misy lafatra mihitsy ny olona sy ny zavatra rehetra dia kivy lava sy tsy manana espoir sy fifaliana mihitsy fa manome tsiny lava ny hafa
Fa manaiky kosa aloha aho hoe aleo mba manana fivelomanana vao miteraka na mba miezaka mitady asa farafaharatsiny fa tsy hoe te hiteraka fotsiny aho nefa ny tenanao aza tsy velonao
Date: 17 janvier 2018 - 19:47
Tsy raison de vivre ny zanaka fa filàna fotsiny, ao amin'ilay zanaka no hametrahana ny fanantenana vaovao amin'ny zavatra tsy vintanao. Raha tena tiana ny zanaka maninona misy betsaka ny olona kivy ratsy mahita ny zanany ratsy fiafaràna ary manenina hoe takizay niteraka ? Misy "attente" zany ao amin'ilay zanaka, raha tsy lasa dokotera na mpitsara na olona ambony ilay zanaka dia takizay takizay, ireny olona manenina ireny no mahasorena.
Marianna >>>> izay indrindra mantsy. Ny faty, faty fotsiny rehefa maty aho fa tsy izaho intsony, na ariana any anaty fako na an-dranomasona ary ny razako dia mitovy ihany satria tsy mifanalavitra amin'ny fatim-biby ihany isika rehefa maty, izany hoe hena. Amiko dia izay.
Za indray dia tsy miankina amin'ny fivavahana. Io fivavahana kristianina io anie tsy antsika e ! Dogme nentin'ny vahiny fotsy hoditra nitsofoka teto io tamin'ny fanjanahan-tany, ka noho izany tsy voatery manaraka izay voalazan'ny baiboliny hoe miteraha maro dia fenoy ny tany. Mino za hoe mety misy fiainana aorinan'ny fahafatesana fa afobe sy paradisa izany resaka nalentika tany an-tsain'olona fotsiny.
Valin-teny >>>> izany no ilaina ny avortement, tokony ekena io, misy betsaka ny zaza tsy niriana mantsy. Fa marina ilay hoe safidy no miteraka fa mba te hamaky ny hevitry ny maro fotsiny aho nanao an'io sujet io.
Tsy hanambady aho fa raha mahita tovovavy mitovy eritreritra amiko dia mety hiaraka hiaina tsotra fotsiny izahay mandra-pisaraka.
Valiny tsotra >>> izay indrindra, négatif daholo no tazan'ny maso eto ka mahavery fanantenàna.
Betsaka ny tanora amin'izao mbola ao an-tranon-RAR dia efa miteraka, lasa kitoatoa ilay fanaovana zaza sady ho hampalahelo ny hiafaran'iny zaza iny rehefa lehibe raha ratsy ny fitaizàna azy, lasa "adulte mal-construit" tsy misy atao fa misotro sy mifoka mandrapa-faty
Date: 17 janvier 2018 - 19:51
Tsy raison de vivre ny zanaka fa filàna fotsiny, ao amin'ilay zanaka no hametrahana ny fanantenana vaovao amin'ny zavatra tsy vintanao. Raha tena tiana ny zanaka maninona misy betsaka ny olona kivy ratsy mahita ny zanany ratsy fiafaràna ary manenina hoe takizay tsy niteraka ? Misy "attente" zany ao amin'ilay zanaka, raha tsy lasa dokotera na mpitsara na olona ambony ilay zanaka dia takizay takizay, ireny olona manenina ireny no mahasorena.
Betsaka ny tanora amin'izao mbola ao an-tranon-RAR dia efa miteraka, lasa kitoatoa ilay fanaovana zaza sady ho hampalahelo ny hiafaran'iny zaza iny rehefa lehibe raha ratsy ny fitaizàna azy, lasa "adulte mal-construit".
Date: 18 janvier 2018 - 08:49
Valiny tsotra ////
Ny resaka ara-panahy no tena noresahako. Tsy dia niresaka firy ny zava-misy eto @ firenena aho izay tsy mitovy @ taloha ary efa iaraha-mahalala. Tena ratsy raha jerena daholo ny zava-drehetra araka ny teninao nefa hoy aho avelao A/tra hanapaka ny fiainana manontolo dia hisy ny fatahiana ary hiavaka eny foana ny mpivavaka marina sy ny tsy mpivavaka araka ilay voasoratra hoe “na hisy arivo lavo aza eo anilanao ianao tsy haninona”.
Ny tokony hisaorana an’A/tra voalohany dia ny mbola nanomezany antsika tombon’andro ahafahana manitsy ny fiainana sy mibebaka dia mangataka ihany koa ny fitarihan’ny fanahy masina hampianatra antsika ny fahamarinana mba hahazoana ny lanitra fa betsaka ny zavatra tsy fantantsika. Izany moa dia vokatry ny fandrosoan’ny fotoana izay manova ny tokony hatao sy izay mety @ntsika olombelona ihany nefa tsy araka ny sitrapon’A/tra. Ilay olon-tiana nolazainao io zao tsy haiko na vady na sipa no tianao ho lazaina fa tsy misy resaka sipa izany ao @ baiboly noho izany tsy araka ny sitrapon’A/tra. Taloha mahamenatra izany fa @zao fotoana dia tahaka ny ara-dalana eo @ fiaraha-monina dia manaraka fotsiny isika taranaka aty aoriana.
Tsy haiko hoe fanomezan-tsiny ny hafa no fandraisanao izay nolazaiko sa inona.
Date: 18 janvier 2018 - 10:44
Mpitady Ny Marina >>> Izay aho vao tafaverina. Fitiavana ankapobeny no resahiko. Araka ny lazaiko hoe ila tsy voafehin'ny hita maso.
Ny mahakivy ny ray aman-dreny rehefa ratsy fiafara ny zanaka dia tsy ho an'ireo ray aman-dreny loatra, fa ho an'ireo zanaka. Ainao izy, dia maharary anao rehefa misy maharary azy. Tena vitsy ny olona manenina niteraka izany na dia tsy tafita aza ny zanany. Tsisy hoe takizay tsy naterako satria tsy Dokotera. Ny mety mampanenina ny ray aman-dreny dia ny fitaizana nataony ihany koa, fa tsy ny niterahany ny zanany. Mila avahana tsara. Ny misy ary tena misy kosa dia olona manenina satria nanala zaza.
marianna >>> Tsy misy izany hoe rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia tsy ho tratry ny viol. Ny fiteny toa izao dia toy ny hoe nisy ni-viol ny olona iray satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy narovan' Andriamanitra satria tsy zanaka vavin'ny mpanjaka ?
Date: 18 janvier 2018 - 11:23
marianna<< Hoy ianao hoe:"Ny olona manao ny sitrapon’A/tra koa tsy ho tratry ny viol ary arovan’A/tra koa ny zanakavavin’ny mpivavaka." Tena gaga @ teninao aho ,toy ny miteny hoe ny mpivavaka tsy mety marary sy tsy mety azon'ny accident zany. Kanefa vao t@ 2017 zao nisy mpivavaka 1 boeing 20 mahery no maty.Tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ve ireny ?Nefa nisy mpanota be zao tany ho any nanao voyage fa hatr@ zao tsy voan'ny accident.
Hoy ny soratra masina hoe: fa ny loza sy ny sampona dia mbola samy mahazo ny olon-drehetra. Hors sujet io resaka io sady somary tsy mifankahazo lay resaka. Izaho raha niteny momba ny hoe zaza azo t@ fijangajangana na viol dia te hanazava fotsiny aho hoe exceptions ireo fa @ ankapobeny dia avy @ tokatrano na olon-droa mifankatia no ipohiran'ny zaza.
Dia hoy koa ianao hoe : " Hitanao matoa A/tra nanao ny olombelona dia mba ho solon’ireo anjely nivadika (Losifera sy ny 1/3 n’ny anjely) izay nazera avy tany an-danitra tsy nahazo famindram-po." Hafa kely ny finoanao ary tsy marina ara-baiboly. Tena projet an'Andriamanitra feno hatsarana ny namoronany ny olona fa tsy hisolo Losifera zany.Raha kristiana ianao dia tokony ho fantatrao fa noforoniny aloha Adama sy Eva vao namoro-tsain-dratsy hamitaka an'i Eva i Satana Devoly. Jereo ireto versets ireto:Genesisy 1:27-28
Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin’ ny hazandrano ao amin’ ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany.
27 Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’ Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy.
28 Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjakà amin’ ny hazandrano ao amin’ ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ ny tany.
Ary na efa nanota aza ny olombelona ka nety maty taorian'ny déluge dia mbola niverina t@ Noé sy ny famille ny io tso-dranon'Andriamanitra io.
Dia hoy koa ianao: "Katsaho ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany." F'angaha rehefa célibataire sy tsy miteraka dia voatery ho tsara ny ara-panahy, ary rehefa manana fianakaviana sy miteraka dia tsy afaka hikatsaka ny zavatra any ambony sy hanana fiainam-panahy tsara?
Ny atao hoe vato kiboribory dia ireo sady tsy vady no tsy zanaka. Appelation io fa tsy hoe fanesoana.
Date: 18 janvier 2018 - 12:43
Marianna>> tsy aleo ve tena izay voasoratra anaty baiboly ihany no zaraina raha tena mino izay voalaza ao e! Be loatra ilay hors sujet
Diso be ny fiheverana fa tsy ho voan'ny loza mihitsy ety an-tany ny kristianina
Eo amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahereza! Izaho efa naharesy an’izao tontolo izao.”
AHAZAKANA FAHORIANA NY FINOANA »
Date: 18 janvier 2018 - 16:17
Ny atao hoe mpivavaka dia ny manao ny sitrapon’At/tra (miezaka ny tsy manota) fa tsy hoe manao asan’A/tra na hoe mpiangona isaky ny alahady nefa ny fahotana atao ihany. Io ilay tenin’i Jesosy « tsy izay rehetra manao tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan’ny lanitra fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko ». Tena mitombina tsara ny tenin’A/tra manao hoe « na hisy arivo lavo aza eo anilanao, ianao tsy haninona ». Porofo, nisy accident malaza be koa teto tana fa ankizy iray ihany no tsy naninona satria nametrahan’ny reniny tanana foana alohan’ny hialany ao an-trano mba ho arovan’A/tra @ ratsy rehetra. Fanehon’A/tra ny voninahiny izany ho an’izay matoky azy.
Ny olombelona rehetra dia nofo sy ra mety marary daholo ary mety hisy zavatra hahazo azy koa. Ao ohatra ny fandikana ny lalan’ny natiora sy fanaovana zavatra tsy araka ny aina, mety ho kapoka koa ho fanitsiana ny fiainana fa misy tsy nety natao, mety tojo olana fa mandresy ho entin’A/tra hanehoany ny voninahiny. A/tra irery no mahalala ny anton’ny zava-miseho satria isika asan’ny tanany. Ny olombelona koa natao ho faty daholo dia mety accident na aretina no hahafaty.
Dia raha ianao no hanontaniako, araka ny sitrapon’A/tra ve ny olona misipa? Natao ho an’iza ny rs? Efa nohazavaiko teo ambony fa ny fanambadiana dia misy ny legalité (fanjakana) sy ny verité (A/tra). Ny legalité mety misy tsy araka ny sitrapon’A/tra. Marina fa A/tra no nanao ny fanambadiana sy rs fa misy ny lalany io fa tsy izay mety @olombelona dia ara-dalana avokoa. Dia mampalahelo ilay olombelona fa fitahan’ny devoly fotsiny hoe fitiavana io. Fitiavana no lehibe indrindra. Fitiavana koa maninona no misy mamoy fo, mamono tena, marary, mitomany, misaraka … Nefa ny fitiavana marina tokony tsy misy fitaka ary tokony hitondra hasambarana.
Angaha moa tsy fantatrao fa anjely I Losifera taloha. Ary ny lanitra dia natao ho an’ny anjely fa tsy ho an’ny nofo. Fa rehefa nikomy t@ A/tra izy sy ny 1/3 anjely tany an-danitra dia tezitra A/tra dia nazera tany ireo ary tsy afaka nibebaka. Banga ny lanitra (io ilay nolazain’i Jesosy hoe “ao @ raiko misy toerana maro”) .Tsy anjely intsony no namboarin’A/tra fa olombelona saingy ny olombelona nofo sy ra tsy afaka handova ny lanitra noho izany misy ny fanadinana. Matoa napetrak’A/tra ny hazon’aina teo afovoan’ny saha dia io ilay fanadinana hasain’A/tra ataontsika dia ny fankatoavana azy izany. Hankato ve isika? Izay ny sujet. Navelan’A/tra haka fanahy antsika ny devoly mba hitsapany antsika, surveillant ny asany. Izy moa mialona sy tezitra @ntsika dia miezaka izy hisarika antsika tsy hankato an’A/tra fa tsy tiany ho lasantsika ny toerany taloha dia izay no antony hamitahany ny olombelona. Rehefa maty isika dia vita ny fanadinana, ny nofo miverina ho vovoka fa ny fanahy no handalo fitsarana. Izay afam-panadinana mankany any an-danitra fa izay tsy afaka any @ afobe.
Ilay voalazanao io miteny hoe “Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy”. Dia manompoa azy dia ataovy ny sitrapony araka ny teniny.
Tsy niteny kosa aho hoe rehefa célibat dia tsara fanahy fa rehefa manana fianakaviana dia tsy afaka hikatsaka ny marina. Ny tiako ho lazaina dia hoe tsara ny manakina ny fiainana rehetra @A/tra dia izy no hitarin-dalana ny fiaianana rehetra mba hananana ahiahy. Ahiahin’I Tang zao ny fahaterany sy hanatitra azy any am-pasana rehefa maty izy dia ny zanaka no eritreriteny hianteherana ny aina anefa hoy aho tsy mifametra. Dia hoy aho tsy ny fanahy ve no sarobidy kokoa noho ny nofo. Tenin’I Jesosy ilay nolaziko io hoe “Katsaho ny fanjakan’A/tra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zava-drehetra”.
io fitiavana io/// Dina zanak’i Jakoba zao voaholana dia i Tamara zanak’i Davida koa zao voaholana satria nanota ny rainy. A/tra mamaly ny heloky ny ray @ zanaka zany. Fa maninona i Rebeka tsy voaholana nefa mbola mandeha andro maromaro vao ho tonga any Isaka ho vadiny. Nefa misy risque be ny diany dia satria A/tra niaro azy efa nankinina t@ A/tra daholo ny fiainan’ilay ho vadiny. Lota koa aza mba saika voaholana tao Sodoma nefa izy manao ny marina dia tsy tratra.
Valiny tsotra///inona ny hors sujet nolazaiko ? Mandainga zany A/tra raha niteny hoe na hisy arivo lavo aza eo anilanao ianao tsy haninona. Naninona zao Daniela raha natsipy tao an-davaky ny liona. Naninona zao Sadraka, mesaka, Abdnego raha natsipy tao anaty laforo???
Mety mandalo sedra sy fitsapana ary mizaka fahoriana koa ny olona manao ny marina (kanefa mbola zakan’ny tena fa tsy fahafam-baraka toy ny fanolanana fa mbola azo averina na sitranina). Kanefa ny fiafarany dia fitahiana be. Jereo I Josefa zanak’I Jakoba sy Joba.
Mandainga ve za??????????
Date: 19 janvier 2018 - 07:38
marianna > An'Andriamanitra ny Fahasoavana, fa tsy ianao olombelona no mamoaka ny fitsarana hoe ity narovany na ity tsy narovany satria izao sy izao. Toy ny tsy hahafantaranao na any an-danitra Rasalama na tsia (fa tsy hoe nohanin'ny alika ny fatiny dia any an-danitra izy izany hahaha), no tsy hahafantaranao ny antony namelana ny ratsy hitranga amin'ny hafa. Ianao ve mihevitra fa ireo niheren-doza ihany no tena mivavaka ? Nisy nanaiky an'Andriamanitra toa an'i Maria ve isika, nefa ny zanany avy eo novonoina ? Satria tsy izay kely bitika takatry ny saintsika no mamehy an'Andriamanitra amin'ny fandaharany, na hanao tsianjery Baiboly aza isika.
Date: 19 janvier 2018 - 09:53
Izay zany lay hoe, na inona sujet, na inona sujet, dia ny resaka Atra tsy ho lavitra mihitsy an..........
Rahoviana ihany aza i Madagasikara no ho tafavoaka ity fahantrana ity Atra ôôôôôô.........
Date: 19 janvier 2018 - 12:21
Trandraka >ka na ny rivotra iainanao io aza avy Aminy ka inona no mahagaga anao e
Date: 19 janvier 2018 - 13:44
Ny teny sy ny olona izay nolazaiko teto dia avy ao @ baiboly. Tsy za no namorona fa samy mamaky baiboly daholo angamba izay milaza azy ho kristianina nefa tantara tahaka ny tantara rehetra no fihevaran’ny be sy ny maro azy. Manome ohatra momban’ny zava-nisy @zao vanim-potoana ianantsika izao aho tsy mino ianareo. Rasalama dia voavonjy, namaky ny tantarany aho ary tena nanao ny sitrapon’A/tra izy. Talohan’ny namonona azy dia ilay hira hoe “hitako ny lalan-tsara ka hizoraka, azoko ny famonjena….”. (Tsy couloir ilay lalan-tsara tiany ho lazaina eto fa lalan’ny fahamarinana izay vitsy no mahita azy). Nolazaiko teto ny tantarany satria izy tsy mba nitsinjo ny nofony sy ny ainy, fa ny fanahiny no zava-dehibe. Izay mintsinjo ny ainy no hahavery azy hoy ny baiboly. Dia te hiteny ianao hoe aiza no fiarovan’A/tra? maninona izy no novonoina ho faty? Samy manana fomba hahafatesany ny olona tsirairay.
- Misy ny maritiora tahaka an’I Rasalama, sy ireo maritiora protestanta niaraka t@, raha ao @ baiboly dia Jaona (notapahan-doha) sy ireo mpianatry Jesosy (Petera, Paoly, Stefana… ). Tsy hoe maty an’ady dia resin’ny fahavalo ireo, na hoe nisy nanafika dia novonoina. Tsia, maty nohon’ny ny finoana an’I Jesosy ireo ary voavonjy. Voninahitra ho azy ireo izany eo anatrehan’A/tra izany ary sambatra ny fanahin’izy ireo @zao. Nisy olona malaza iray izay koa naniry mafy ny maritiora toa an’ I Rasalama saingy tsy navelan’A/tra fa fomba hafa ny nahafatesany. Satria diso ny fivavahany. “Ny voninahitro tsy omeko ny hafa” (hafa = izay tsy mpivavaka marina) hoy ny Tompo. Mbola hisy maritiora ao @ Tompo koa eto rehefa tonga ny anti-kristy (ary efa tereka any @izao tsy fantatro fotsiny na zaza na efa lehibe izy @zao).
- Jesosy tsy azo ampitoviana @ntsika satria raha tsy novonoina izy tsy nisy ny famonjena antsika jentilisa. Mila fantatrao zany raha tena mpivavaka ianao satria ilay ra latsaka iny no manadio ny fahotana.
- Betsaka koa ny mpivavaka no tsy maty maritiora fa maty tahaka ny olona rehetra. Fa teo @ fiainany izy nanehoan’A/tra ny voninahiny tahaka an’I Davida. Mafy ny ady rehefa miady @ fahavalo fa nankininy t@ A/tra ny adiny dia naharesy foana izy. Tsy mba lavo teo anatrehan’ny fahavalo tahaka an’I Saoly izy. Dia tahaka izany koa ilay trangana accident nolazaiko tetsy ambony zava-misy @zao fotoana izao izany.
Ireny tantara ao anaty baiboly ireny dia natao ho antsika hahafahantsika manao ny sitrapon’A/tra sy mitondra ny fiainantsika sy ny ankohonantsika andeha @ fahamarinana sy ny fahamasinana. Anatra ho antsika daholo izay zavatra niaianan’ny olona rehetra voasoratra ao. Ny tenin’A/tra voalaza ao @ baiboly dia mbola manan-kery foana na @zao andro iainantsika izao fa tsy hoe t@ andro taloha izany ary A/tra tsy mandainga @ teniny. Sa tsy izany ve no andehananareo any am-piangonana? Inona tokoa moa no aleha any raha tsy hino izay voalaza ao?
Date: 19 janvier 2018 - 14:54
Trandraka/// Ilay hira “allo Jesosy” iny mahavaly ny fanontanianao. Hiran’izao tontolo izao dia mampiomehy sy mahafalifaly ny be sy ny maro fotsiny nefa tena voampita tsara ilay hafatra. Mbola misy tsy tonga saina ihany ary tsy tafapaka any am-pon’ny be sy ny maro. Tahaka iny no tiako ho lazaina nefa tezitra @ko ny sasany ato nefa ilay mpihira toa tsy misy mpanakiana.
Hihihihi///ilay rivotra cyclone ve no tianao ho lazaina ? Raha loza voanjanahary dia kapok’A/tra satria isika maditra. Ny olombelona koa araka ny henoko efa mahavita mamorona rivotra. Misy zavatra apetraka any anaty ranomasina dia lasa misy hafanana ary miforona ho rivon-doza. Tsy miditra lalina @iny aho fa an’ny manam-pahaizana sy ny mpanao politika zany.
Date: 19 janvier 2018 - 15:04
marianna > Ho fanajana ny tompon'ny sujet dia tsy valiako ianao, ankoatra ny hoe : Mianara mafy aloha fa aza maika ny hanoratra lava be. Mirary soa.
Trandraka >>> Miala tsiny amin'ny mpamaky sy ny tompon'ny sujet fa lasa nivoana tokoa ny resaka. hihi.Misaotra nampahatsiaro.
Date: 19 janvier 2018 - 15:11
Izaho dia mitovy hevitra tanteraka @ mpamorona sujet.
Betsaka loatra ny fahorian´olona mitranga eto an-tany dia mbola ho ampiana foana ve? Tsy misy à l´abri n´izany anefa na ny olona nianatra na ny mahantra na ny mpanan-karena. Ny RAR manao izay mety @ zanany, fa ny société koa manana influence @ fiainana, ary ny zaza hanana ny caractère-ny.
Ary ny tena mahagaga dia ny olona tsy dia manana ny ampy loatra eo @ fivelomana no tena miteraka maro.
Ny tena olana dia ahoana moa izany ny fiainantsika zanak´olombelona afaka 50 taona? Ny isan´ny olona mitombo mitombo ihany, nefa ny tany vokarina ny eo ihany no eo. Hany ka mitady hevitra foana ny zanak´olombelona mba hahazoana vokatra betsaka ary ao anatin´ny fotoana fohy. Ny usines sy ny autos mitombo hatrany hanimba ny tontolo iainana, ny biby sy ny zava-maniry ampiasana izao produits chimiques rehetra izao mba hitombo haingana. Dia samy gaga avy eo fa miha-betsaka ohatra ny olona voan´ny cancer.
Ho ahy manokana dia aleoko manangana sy manampy izay zaza sahirana , izay tsy fidiny ho azy no tonga teto an-tany. Tsy ny hoe hisy hilanja ny fatiko rehefa any aoriana sns...no olako. Tsy fitiavan-tena fotsiny ve izany???? Izaho ary efa maty. @ izay koa alohan´ny hahafatesako mandry ny saiko fa tsy namela fahoriana eto an-tany aho satria tsy misy voasoratra mialoha ny ho avin´ny zaza ateraka.
Mandrora mitsilany isika olombelona.
io fitiavana io///
Satriko dia satriko hanao hanoratra zavatra fohy tahaka ny nolazaiko teo ambony saingy ny voanjo mila voasana fa misy tsy mahavaovy (tsy mahatakatra ilay saina).
Tsy ampy 30 mn tahaka ny toritenin’ny mpitondra fivavahana ao @reo io nefa ataoko fa nisy loha-hevitra mampisaintsaina dia ny fanehoana ny voninahitr’A/tra.
Date: 19 janvier 2018 - 16:49
Nivaona be ny resaka, HORS SUJET no betsaka.
Hiezaka hiverina kely aho raha mety.
Andao ary atao sarisary ny mety hiseho afaka 100 taona hoan'ny mpiady hevitra.
1)Ireo clan tsy mahita antony hiterahana anisan'izany ny mpamorona ny sujet: Atao hoe hiombo-kevitra aminareo avokoa ny olombelona @ daty androany, ka manomboka rahapitso dia tsy hisy hiteraka intsony ankoatra ireo vohoka en cours. Raha 80 taona eo ho eo ny espérance de vie dia haka marge isika ka aleo ho atao hoe 100 taona.Amin'ny taona 2118 izany dia ho foana tsy hisy intsony ny olombelona na efa tena antitra be sy vitsy kely sisa fa olo mody daholo. Tsy hisy haka intsony ny ressources fa ho lava volo ny tany rehetra jerena, hifarana ny fiainana.
2)Ireo mbola mahita sens @ hitohizan'ny fiainana na dia misy aza ny olana ka mbola hiteraka: mazava be fa mbola hisy taranaka hifandimby @ 2118.Hitohy ny fikarohana ara-pitsaboana maro isan-karazany, hitohy ny teknolojia na ratsy na tsara ny vokany.Hitohy ny fiainana. Ny laharam-pahamehana ho azy ireo dia tokony ho ny fifehezana ny isan'ny zaza ateraka mba ho tsaratsara kokoa ny condition de vie.
Samy misafidy na ny 1 na ny 2 fa aza misy miady.
Aoka fotsiny ny misafidy ny 1 mba tsy hiova hevitra satria ny fitaizana dia tena sacrifice be hoan'ray aman-dreny, indrindra hatreo @ faha 5 taonan'ny zaza iray. Ka raha olona misalasala ny @ antony fitohizan'ny aina dia aleo tonga dia tsy manao satria betsaka ny aretina mpahazo ny zaza @ reo taona ireo ary mila fikarakarana sy assistance en permanence ny zaza ka sao manamaivana ny aina ka hieritreritra hoe aleo ho faty any ilay zaza satria tsy dia misy antony ny fahavelomany.
Izaho manokana dia tsy manana fiainana tonga lafatra, ny ray aman-dreniko tsy tonga lafatra fa nanao izay azo atao. Maro ny jaly niainako saingy tsy mbola nanome tsiny ny ray aman-dreniko aho ny @ antony niterahany ahy. Tiko ny miaina na tsy tsara foana aza ny fiainana, na dia maro be aza ny olana dia "la vie vaut la peine d'être vécue". Naleoko niaina nahita zavatra maro be (ny rélation humaine, ny gout, ny valeurs maro isan-karazany...)toy izay tsy nisy mihitsy. Misaotra ny ray aman-dreniko aho ary misaotra an'Andriamanitra mpanome aina.
Date: 19 janvier 2018 - 19:33
Misy mampalahelo indraindray ny mamaky ny fahitan'olona sasany ny fiainana, ny antony iterahana.Toa misy souffrance be izany ao ambadika,misy fahakiviana....
Izaho manokana aloha dia tena miombon-kevitra @ireo nahita sy nahatsapa izany hoe "fitiavana madio , pur "izany rehefa nahazo ny zanako.
Trouver le sens de la vie ara-bakiteny, ny antony hifohazako maraina, ny hiasako, ny antony ny sacrifice rehetra
Mitondra aina, manohy aina, menaky ny aina, mahalala izany maha sarobidy ny zanaka izany ny Ray sy reny
Date: 19 janvier 2018 - 20:22
Hummm, fa angaha moa ny atao hoe zanaka dia izay nateraky ny tena ihany????
Izaho dia tsy manana olana @ fiterahana, fa saingy tena safidy tsotra izao hoe, tsy hiteraka izahay mivady fa aleo ny carrière no atao izay mahatsara azy aloha, dia avy eo manampy olona sahirana, sady manangana zaza tsy ampy fivelomana nefa tsy fidiny ho azy no tonga teto an-tany.
Raha samy maka ohatra isika hoe nisy vehivavy iray tokana izy taloha, dia nanambady dia avy eo niteraka. 50 taona taty aoriana lasa miisa 40 ny taranany ohatra, dia nefa ireo mbola hiteraka daholo indray donc vao maika hihamitombo. Mety ho lasa 250 ny isan´ny taranany afaka 80 taona. Dia toy izany hatrany...
Manontany tena aho hoe dia ahoana moa izany ny hiafarantsika olombelona any aorian any.
Misy miteny eo ambony hoe hors sujet aho, nefa samy manaposaka ny raisons hiterahany na tsia daholo ny olona eto. Ary tafiditra tsara ny atao hoe fitiavana araky ny rubrique. Tsy voatery hoe fitiavan´olon-droa, mety fitiavan-tena, fitiavana ny hafa ect...
Date: 19 janvier 2018 - 21:35
io fitiavana io <<<< tena misy ny RAR manenina ary za mahafantatra olona vitsivitsy hitako @ fomba firesany an-janany, antony nitenenako koa hoe rehefa ratsy fiafara ny zanaka, manenina ny RAR dia ilay fifaninànana amin'ny hafa rehefa mahita hoe tafa be ny zanak'i Rakoto sy Rabe dia ahoana moa ianao no tsy hampitahy, tsy afaka amin-dra olombelona mintsy io resaka "comparaison" sy "jalousie" io satria anaty comportement naturel.
Tsy misy olana na mivoana aza ny sujet, natao ho hitarina koa mantsy no nanaovako azy. Afaka hitarina hatrany amin'ny resaka franc maçon sy illuminati koa aza io resaka io hihi
Trandraka >>>>> Na ny fanadiovana tanàna ary dia Andriamanitra no antsoina aiza moa no handroso, ny malagasy oa miandry tolorana loatra ary izay no tena tsy mampivoatra. Hankinina @ fivavahana daholo izao rehetra izao kanefa ny ezaka tsy misy na kely aza.
Ny olombelona <>>> Ity tany ity atsy ho atsy ho simba tanteraka noho ny adalan'ny olombelona ihany.
Izany indrindra mantsy aleo manangana izay zaza efa eo raha toa ka vonona ny hitaiza.
Mihitatra mintsy io resaka taranaka io ka tsy misy fiafaràny raha toa ka hanana hevitra ny hiteraka daholo ny rehetra, ny ressources eto an-tany nefa tsy maharaka sahady amin'ny isan-tsika izay 7 milliards fotsiny. Afaka 100 taona mety efa ho 15 milliards mahery. Za mino fa tsy resaka fotsiny ilay hoe miketrika ady lehibe faha-3 ny mpitondra amin'ny firenen-dehibe handaminana an'io resaka surpopulation io.
Valin-teny <<<< Aleo hihitatra mintsy ny resaka amin'izay tsy mila manokatra hafa.
Aleo mintsy ho foana ny olombelona fa amiko isika no tena virus eto an-tany. Niaina milamina ery ny zava-manan'aina rehetra raha tsy nisy antsika.
Marianna<<<<< Ilay resaka fivavahana aloa ry MARIANNA dia mavesatra amiko loatra, manana ny hevitro manokana amin'io aho fa aleo tsy vorahako eto sao lazainareo fa very fanahy eo
Date: 25 janvier 2018 - 15:32
O ry zareo a, mba diniho tsara fa misy hisaintsainana ny hevitry ny tompona sujet an !
Tsy ilay hoe ny fiterahany tsirairay (marina fa raison de vivre ilay miteraka sy mikarakara ny zanaka) akory fa ny fitombony mponina ny tiako hatongavana.
Ianareo ve dia mbola tsy naheno resaka hoe "bombe à rétardement" ho any firenena mahantra ny "croissance démographique galopante" ?
Ianareo ve mbola tsy naniry hoe ho vita araba tsara ny lalana mandeha any ambanivohitrareo, sy ny ahafahanareo mandeha @ lalana tsara @ ireo toerana tsara azo hivahinianana rehetra eto Madagascar ?
Ianareo ve tsy mba sorena @ fitohanany fiara eto Antananarivo, sy ny délestage, na ny tsy fahampiany tosiky ny ranon'ny JIRAMA, na koa ny fivangongoany fako sy ny lotony tanàna ?
Ianareo ve mbola tsy nihoronkoditra maheno ny vonoan'olona sy ny amboletra ataony jiolahy antanan-dehibe (mpamaky trano, mpangarompaosy, mpanendaka) sy ny any ambany vohitra (dahalo, malaso) ?
Ianareo ve tsy mba malahelo hoe misy ankizy tsy ho lasa lavitra @ fianarany satria dia lavitra ny fianarana ambaratonga manaraka sy noho ny faharatsiany kalitao ny fianarana @ fanjakana, na koa maheno hoe maro ireo vhv maty ampiterahana, sy ny ankizy maro maty alohany faha dimy taonany noho tsy fisiany tobim-pitsaboana sy ny tsy fahampiany fanafody, fitaovana sy mpiasany fahasalamana ?
Ianareo ve tsy mahatsapa fa ilaina ny fanamboarana trano sy tanàna manara-penitra (misy jiro, rano, fivoahana)
Ny anton'ireo rehetra ireo dia tsy maharaka ny filany mponina noho ny fitombony haingana loatra ny entimanana eo ampelatanany ny fanjakana (ohatra ny azony avy @ hetra) mba ahafahana misahana ny andraikiny (fanamboarana sy fikojakojana foto-drafitrasa toa ny lalàna jiro sy rano, sekoly, toeram-pitsaboana, fanarahamaso ny fandriampalemana, fikarakarana ny fampianarana sy ny fahasalamana).
Etsy andaniny mba ho aiza moa ireo tanora tsy mahita asa mifanaka @ faripahaizany ? (ohatra niveau CEPE na latsak'izany, BEPC, BAC) satria vitsy ny fanaganana orin'asa haka hidiran'izy ireo miasa ?
Mety hiteny anareo hoe ampy anareo ny fidiram-bolanareo ampianarana ny zanakareo @ sekoly raitra, sy manatona mpitsabo handoavam-bola. Saingy tsy misy mahavidy lalana sy foto-drafitr'asa isika tsirairay na hanakarama andian-tafika hiaro an-tsika sy ny fianakavian-tsika manokana.
Dikan'izany, tokony mba dinihina sy jerena akaiky ny fitombony mponina, dia inona moa izany fa tsy momba ny isany zaza ateraka (politique anti-nataliste na limitation de naissance) na dia masiaka ny tenin'ny tompony sujet hoe tokony mahazo alalana ny olona @ isany zaza azony ateraka. Fa tsy misy moa h@ fitondrana sahy mametra ny zaza ateraka !
Farany. Zaza roa ihany no ateraky ny vhv iray anie hoy ireo mpahay momba ny fitombony mponina (Démographe) dia ahafamana mitazona ny isany mponina tsy hihetsika (renouvellement de la population).
Date: 25 janvier 2018 - 17:23
Misy namana mitena ao ambony ao hoe "Misy mampalahelo indraindray ny mamaky ny fahitan'olona sasany ny fiainana, ny antony iterahana.Toa misy souffrance be izany ao ambadika,misy fahakiviana...."
Raha amiko manokana aloha dia tsy izay mihintsy ny fipetrany. Tsy hoe misy souffrance na fahoriana, fa mba ho fitsinjovana ny mety ho avin´ny taranaka any aoriana. Tsy izao dia izao ny olana no mitranga fa rehefa aoriana kely ao, na dia efa manomboka tsapa ary izany ankehitriny.
Raha mitombo be loatra isika dia inona moa izany no hohanin´ny olona, satria ny vokatra tsy haharaka intsony.
Vao omaly mihintsy aho no nahita t@ télé fa efa misy société miompy insectes, dia anaovana hamburger avy eo. Satria ny insectes tsy mila sakafo betsaka sy toerana malalaka nefa dia mitombo vetivety.
Amiko dia midika izany fa efa betsaka ny olona conscients @ ho avintsika zanak´olombelona.
Kanefa dia mampalahelo fa izao isika mbola afaka mihinana fruits sy légumes sy izay zavatra tiana , fa raha mitohy izany ny fitombon´ny mponina dia ho insectes sisa no atao sakafo.
Date: 25 janvier 2018 - 20:03
Dia tena ny philosophie ny franc maçon mihitsy anie ny vohizinareo @ ity hoe dinihina sy jerena akaiky ny fitombony mponina,politique anti nataliste
"Miteraha ary mamanoha ny tany" ," Anjakao ny zava-boahary"
Dia teny avy ao anaty baiboly!!Ny namorona ny tany sy lanitra no nitso-drano ny olombelona toy izany.
Ny isan'olombelona dia tsy ho dangereux ho an'ny tany sy ny zava-boahary nomena hanjakany mihitsy raha oharina @ resaka nucléaire,radioactivité,guerres ethniques foronina etsy sy eroa sns
Par: mitady ny marina koa
Date: 25 janvier 2018 - 20:12
Mitady ny marina >>>>>
misy hitovizana be ny hevitsika >>>>
ny resaka hoe fitiavana , ny hoe avy @ Atra sns dia subjective izany ny fahitako azy, mety amin olona rehefa izay no tiany ,na hoe izay no manakaiky ny fijeriny,
Fanonataniana tokony hapetraka dia hoe malalaka ianao na hiteraka na tsia,
misy fiantraikany daholo na ny voalohany na ny faharoa, ny azo antoka fotsiny dia tsy hisy "conscience " ary tsy hisy "zaza" hanontany anao hoe nahoana ? raha misafidy tsy hiteraka ianao,
be souffrance be eto, mazava be izany, kanefa azo atao tsara ny misafidy tsy handefa olona ho eto,
rehefa mety aloha ny zavamisy , tafita ny ankizy sns, dia tsara , faly daholo, fa aza adino fa na ny fianarana io aza dia tsy voajanahary ho an ny olombelona izany, misy mihitsy ny torturé, marary , lasa adala , na matin ny crise cardiaque, izany dia vokatr ilay hoe ny hatsembohana no hivelomana, na ny sandry no miasa , na ny saina , samy enjana ireo, za tsy miditra lotra @ resaka fivahanana, ary tsy manome tsiny ny mpahary, tsy manome tsiny izay misafidy hiteraka, na mahantra , na tsia, fa kosa tena micomprendre tanteraka ireo izay misafidy tsy hiteraka
Date: 26 janvier 2018 - 11:30
Raha ny tena izy dia on ne fait pas des enfants pour soi même! !
Rehefa tsy manana fitiavana omena ianao dia efa sarotra be aloha ny ahavitanao izany. Ny fofon'aintsika io aza indramina ary mbola haverina @Tompony
Les enfants viennent à travers nous mais non de nous!!
Date: 26 janvier 2018 - 16:39
ankoatran i jesoa , dia vokatry ny acte ataon olona roa ny olombelona tonga eto, mety misy antony isan karazany io,
Ny resaka fitiavana dia tokony naturel io, tsy zavatra foronina ,na baikon ny olona ,na ny biby io, aretina momba ny saina ny tsy fitiavana izay nateraka .
""Les enfants viennent à travers nous mais non de nous!!"" , fijery mifandray mivantana @ fomba finoana izany ,raha izany , ny olona dia tonga eto noho ny fandaharana , ary fitaovana ny mpiteraka , dia mba ahoana anefa ireo vokatry ny viol raha izany, ahoana ireo marary saina na manakilema hatrany ambohoka ?
Date: 27 janvier 2018 - 21:50
Mitady ny marina koa>> misy tsy takatry ny sain'olombelona ny zava-misy mitranga eto an-tany! !
Avy aiza tokoa moa ny aina? Nahoana isika no eto an-tany? Inona no anton’ny fiainanà? Misy dikany ve ny fiainana? Tsisy olona na iray aza nangataka tamin’iza na iza ny ho tonga et&#7923; an-tany
Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny aina ary tian’Andriamanitra hanaja ny aina isika, izany hoe ny aintsika sy ny ain’olon-kafa.
Tsy anjarako ny hitsara izay safidin'olona voaholana sy niharan'ny herisetra fa ny hany fantatro dia rehefa manaiky ny sitrapon'Andrimanitra dia izay heverina ho loza aza kay mivadika ho fiainana sy fiadanana .
Par: Tsy matotra
Date: 28 janvier 2018 - 11:04
Hoy ny ohabolana Allemand izay hoe
"Tsy lasa olon-dehibe (adulte) ny olona iray raha tsy efa manan-janaka"
Nena tena marina tamiko io, naha matotra ahy rehefa niteraka
Par: gaga be
Date: 29 janvier 2018 - 08:00
Zay aho vao naheno olona niteny hoe inona ny antony iterahana zany,za aloha mbola tsy niteraka fa mahita zazakely trotron'ny reniny sns d tonga d otran'ny tsapako hoe mamy ery zany mananjanaka zany, hevitro manokana io, ary ny tsy miteraka tsy mety mahazo zaza ary @ko efa tsy fidiny, fa ny antony iterahana dia fitiavana aloha voalohany indrindra, ary mba ananana taranaka sy fara amandimby, dia rehefa marary sy miha antitra koa indrindra indrindra,ra mba manajanaka dia misy mikarakara sns,satria raha sendra marary,ny havana tsy votery ahavita anao akory fa ny zanaka tsy manary zany fa eo fôna